Xiddiga NBA-da ee LeBron James ayaa soo afjaray sannad guulo ah oo uu gacanta ku dhigay wax kasta oo uu u tartamay, waxaana uu kasoo bilaabay guushii horyaalka Premier League ee kooxda uu saamiga ku leeyahay ee Liverpool ay gacanta ku dhigtay, taas oo uu ku sii xigsiiyey kooxdiisa Los Angeles Lakers oo uu xalay kula guuleystay horyaalka kubadda kolayga Maraykanka NBA-da.
LeBron James oo sannadkii hore kusoo biiray LA Lakers oo uu uga soo wareegay Cleveland Cavaliers ayay sannad kaliya ku qaadatay inuu kula guuleysto horyaalka NBA-da kooxdiisa cusub, iyadoo ay kulamadii finalka oo ay iskugu soo hadheen Miami Heat oo uu hore ugu ciyaari jiray ka hor intii aanu Cavaliers ku biirin ay kulankii xalay LA Lakers ku badisay 106-93 dhibcood.
Laacibkan ayaa markii ay ciyaartu soo dhamaatay ee ay kooxdiisu ku guuleysatay koobka, waxa la guddoonsiiyey abaal-marinta MVP ee ciyaartoygii ugu qiimaha badan ama ugu wanaagsanaa xili ciyaareedka dhamaaday tartanka NBA-da, taa soo uu sannadkii afraad gacanta ku dhigay.
LeBron James ayaa ka caawiyey LA Lakers inay ku guuleystaan horyaalkoodii ugu horreeyey tan iyo sannadkii 2010, waxaana lagu soo xidhay kulamada xidhiidhka ah ee Miami Heat ay isku waajahayeen ee toddobada ahaa ciyaartii lixaad maadaama afar ka mid ah ay guuleystay Lakers oo aan loo baahanin inay ciyaaraan midka toddobaad.
35 jirkan ayaa xalay dhigay wacdaro kale oo ah in kulankii 11aad ee ciyaaraha finalada ah uu dhaliyey min 28 dhibcood oo saddexley ah, taas oo uu ku darsaday 14 kubbad-qabasho (rebounds) iyo 10 caawimood oo uu sameeyey.
Taariikh gaar ah oo aan hore uga dhicin Maraykanka ayaa LeBron James xalay loo diiwaangeliyey, waxaanu noqday laacibkii ugu horreeyey ee dhamaan ciyaaraha kala duwan ee Maraykanka laga dheelo sida NBA, MLB, NFL iyo NHL ku qaata abaal-marinta MVP saddex kooxood oo kala duwan, waxaana uu hore usoo hantay xilliyadiisii Cleveland Cavaliers iyo Miami Heat.
Dhinaca kale, LeBron James oo saami ku leh kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa bishii June waxa uu u dabbaal-degay guushii horyaalka Premier League ee kooxdaas oo uu ka helay dhaqaale badan.
Markii ay ciyaartii xalay soo dhamaatay ayuu LeBron James garoonka dhexdiisa u jiibsaday sida boqorrada, waxaanu shitay sigaarka ay cabbaan dadka caanka ah ee Maraykanka, iyadoo uu isku kala bixiyey sidii nin raaxaysanaya.
Si kastaba, sannad guuleed ayaa usoo dhamaaday LeBron James, waxaanu caddeeyey in uu u qalmayay lacagtii badnayd ee ay LA Lakers kasoo bixisay iyo mushaharka waallida ah ee uu qaato intaba.